Public Health in Myanmar: Different Ways of Contraception
ကျေးဇူးပဲ ကိုဗြဂ္ဃရေ ..
အခုလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဗဟုသုတရအောင် ရေးတာမျိုး ရေးတတ်ချင်သားဗျ။ နောက်လည်း ဆက်ရေးပေးပါဦး။
i use comdom and pill. it can safe 100% or not?
ကို Byakga က သုတစာတွေထဲမှာ ရီစရာ ရသတွေ သိပ်ထည့်တာပဲ။ စာတွေ များပြီး ခေါင်းရှုပ်နေတာ ကို Byakga ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မ ခေါင်းရှင်းသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Dr ရဲမွန် ပြောသလိုပဲ နောက်လည်း ဒီလို အရေးအသားကောင်းတဲ့ ပို့စ်တွေများများ တင်ပေးစေချင်တယ်။ ကျွန်မ ကွန်ပြူတာ ပျက်ပြီး Link တွေ အကုန်လုံး ပျောက်သွားလို့ ကို Byakga ဘလော့ဂ် လိပ်စာလည်း မရှိတော့လို့ နောက်ပိုင်း မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီမတိုင်ခင် ရောက်ဖြစ်တုန်းကတော့ ဘလော့ဂ်ရေးတာ ခဏရပ်ထားတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ အခု ဘလော့ဂ်ပြန်ရေးနေပြီ ဆိုရင်တော့ ဘလော့ဂ်လိပ်စာ ရချင်ပါတယ်။ C-Box မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထည့်ထားပေးလို့ရမလား။
Thanks for reading the post and your comments, ko ye mon and ma nge naing. I haven't wrote much these days. Here is my blog address, by the way, http://byakga.blogspot.com/ You are much welcome to visit my blog as well although there are not much posts.
ကျေနပ်အားရလိုက်တာဗျာ။ တော်ပါပေသည်။ အရေးအသားရော တင်ပြပုံပါ ကောင်းသော ရှားရှားပါးပါး ကျန်းမာရေးရာ သုတအဖြာဖြာ ဆောင်းပါးကောင်းပါပဲ။ ဆထက်ထမ်းပိုး တိုးလို့ ရေးသားဖြန့်ဖြူးနိုင်ကြပါစေ။
Evra Transdermal Patch မြန်မာပြည်မှာ ၀ယ်လို့ရပါသလား ....ပြီးတော့ ဘယ်ဆေးဆိုင်မှာ ၀ယ်လို့ ရပါသလဲ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မှာပေါ့ .....ကျေးဇူးပါ .....မေးလက်စနဲ့ တစ်ခါထဲမေးပါရစေ .... ရိုင်းချင်လို့ မဟုတ်ပါ ....ဓမ္မတာ လာတဲ့ အချိန်မှာ တန်ဆာမှ အမွှေးများက စိတ်အနှောက်အရှက်ဖြစ်ရသဖြင့် လုံးဝမပေါက်အောင်(အရှင်း)ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဆေးများရှိရင် ညွှန်းပေးပါလို့တောင်ဆိုချင်ပါတယ်....ကျန်းမာရေးကိုရော ထိခိုက်နိုင်ပါသလားဆိုတာရော သိချင်ပါတယ်ရှင့် .......ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် ............